Khilaafkii Ugu Weynaa Oo Soo Kala Dhex Galay Wasaaradaha Tamarta & Macdanta Iyo Arimaha Gudaha +Wareegto M/Weyne Biixi Soo Saaray Oo Jabtay Iyo Sababta
Tuesday 3rd April 2018 09:55:56 in Wararka by Suuqa Hoose
Hargeysa(HLN);-Wasiir ku xigeenka arimaha gudaha Somaliland Md Maxamed Muse Diiriye ayaa ka hor yimi Wareegto uu Madaxweynaha Somalialand Md Muuse Biixi Cabdi soo saaray .
Hargeysa(HLN);-Wasiir ku xigeenka arimaha gudaha Somaliland Md Maxamed Muse Diiriye ayaa ka hor yimi Wareegto uu Madaxweynaha Somalialand Md Muuse Biixi Cabdi soo saaray . Wareegtadaasi oo ahayd in Masuuliyiinta kala duwan ee Xukuumadu isku siyaasad noqdaan isla markaasina hanaanka shaqo wadaaga iyo maamulku isku jaan wada noqdaan .
Taasi oo meesha ka saartay habdhaqanka looga bartay Xukuumadihii kala dambeeyay ee Somaliland soo maray oo iyagu caado u lahaa inay hal mawduuc oo Siyaasada Xukuumada ah siyaabo kala duwan uga hadlaan.
Waxana jebinta dhaqan galka wareegtaadaasi timi kadib markii Wasiir kuxigeenka Arimaha gudaha Somaliland Maxamed Muse Diiriye uu is hortaagay Waraaqo sharciyaysan oo kasoo kala baxay Wasaarada Tamarta iyo Macdanta iyo weliba Laanta Socdaalka Somaliland .
Waxana Warqadahaasi ogolaansho dhaqdhaqaaq Sahamin Macdaneed usiinayeen Khubaro ajaanib kala duwan oo Wasiir udawlihii hore ee Wasaarada Tamarta Iyo Macdanta Md Abdirahman Simoodi ugu kexeeyay Gobolka Sanaag .
Waxana Khubaradani iyo cidii waday ee masuulka ka ahayd markay Xarunta gobolka Sanaag dhawaan gaadheen Badhasaabka Gobolka Sanaag Mr Tiimbaro ku amray inay xidhan yihiin isla markaasina deg deg utagaan Saldhiga Booliska Magaalada Ceerigaabo.
Halkaas oo dood dheer iyo hadal dhexmaray Badhasaabka iyo Wakiilada Khubaradan waday sahanka Macdaneed uu Badhasaabka Gobolka Sanaag Sheegay in isaga lasoo siiyay Amar Guud .
Waxana isla maalinnimadiiba Warbaahinta ka hadlay Wasiir Kuxigeenka Arimaha Gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo ku tiraabay hadal lidi ku ah Warqadihii Khubaradan Sahanka Macadanta u socday ee ay Wasaarada Tamarta & Macdanta iyo Laanta Socdaalku siiyeen Sharciyada ogolaanshaha dhaqdhaqaaqa .
Arintaasi oo khilaaf xoogan ka dhex abuurtay Masuuliyiinta Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliland , Wasaarada Tamarta & macdanta iyo Laanta Socdaalka oo hadalo yoo-yootan ahi ku dhex mareen Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Hortiisa .